Ọdịdị dị mfe, usoro aluminom, ihe karịrị 75% -95% nghọta.
Ọ dị mfe ịtọlite ​​na ntinye, ntinye nrụpụta dị.
Ofụri Esịt ime ụlọ, na-abụghị UV nchebe ma ọ bụ ọkara n'èzí, 100% UV-echebe nwere ike ịbụ na nhọrọ.
Kacha ọhụrụ na popluar transperent Ikanam ihuenyo, ma synchronous na asynchronous akara nwere ike na-akwado.
1.High ogo nke visibiliti: Ọ bụ adaba maka ndị mmadụ n'ime na n'èzí anya-site. Igwe ọkụ ndị ejikọtara ọnụ dị ntakịrị nke na ọ naghị ahụ anya site na mpụga ụlọ ahụ.
2. komp Design na Light Weight: ọkpụrụkpụ nke ikanam panel nwere ọ fọrọ nke nta adabara ọ bụla iko mgbidi ụlọ. Ihe dị arọ bụ naanị 6kg / kabinet ma belata ibu na mgbidi iko.
3.Ease nke nwụnye na mmezi: Ọ dịghị mkpa ịgbanwe ihe owuwu ụlọ ọ bụla. Enwere ike ịrapara modulu na azụ nke mgbidi iko site na gluu pụrụ iche nke anyị gosipụtara. Ọ chọrọ naanị 10 sekọnd iji wụnye otu modul. Ọ bụrụ na mmezi ọ bụla emee, ọ na-achọ ime ya n'ime ụlọ.
4.Wide nso nke ngwa: Widely Application for shopping mall, nnukwu ụlọ iko mgbidi, ogbo ndabere ada ngosi, cha cha, ngagharingosi, egwu, ngosi, yinye ụlọ ahịa na uwe shop, ọbụna na Back window, wdg E arụnyere n'ime ma na nnukwu enwu maka n'èzí.
5.General usoro: izute mkpa ndị dị mkpa nke ngosipụta oge niile.usoro ahaziri iche: itinye n'ọrụ na nhazi ngosi obodo mepere emepe, nhazi usoro nke ogbo. Usoro dum dabere na nchikota nke ihe ngosi okike & ọkụ ala.
Ikanam uzo VS omenala ngosi:
1. Light light & ala ifufe ibu. Eachinled Ikanam ntupu nghọta ka 70% n'ụzọ dị irè belata ifufe-ikpuru.
2. Ndenye echichi, enweghị ụkwụ ígwè Ọdịdị, ma n'ihu & n'azụ echichi; ntinye ikuku enweghi onodu putara obere ike oriri.
3. Easy mmezi: ma n'ihu & n'azụ mmezi; ọtụtụ kposara iji kesaa ogwe ọkụ na-enweghị dochie kabinet; ma ọ bụ ị nwere ike wepu kabinet ngwa ngwa wee dezie ọkụ ọkụ.
4. Nnukwu ike, nzuzu na-egosi imewe, wuru na-ike ọkọnọ & anata kaadị, kwa unit nwere ike na-arụ ọrụ n'otu n'otu; ike na mgbaama ikere otu waya.
5. Nlekọta IP dị elu ruo IP65, akụrụngwa dị mma na ọmarịcha teknụzụ, arụmọrụ kwụsiri ike.
ECO Piel Series SMD VS Omenala SMD
Ngwa: Ogbo; Mkparịta ụka; Ihe omume, wdg.
2. Kọmpat Design na Light Weight: ọkpụrụkpụ nke ikanam panel nwere ọ fọrọ nke nta adabara ọ bụla iko mgbidi ụlọ. Ihe dị arọ bụ naanị 6kg / kabinet ma belata ibu na mgbidi iko.
5. General usoro: izute mkpa ndị dị mkpa nke ngosipụta oge niile.usoro ahaziri iche: itinye n'ọrụ na nhazi ngosi obodo mepere emepe, nhazi usoro nke ogbo. Usoro dum dabere na nchikota nke ihe ngosi okike & ọkụ ala.